ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၂ | Pandaing Map
ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ ? ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ? အပိုင်း-၂
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ ယူနီကုဒ် ကို စသုံးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲ ?
ကတော့ အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ သူ့ကို ဖောင်ဒေးရှင်း အုတ်မြစ်အဖြစ်သုံးပြီး ကျနော်တို့ နည်းပညာအသစ်တွေ ဖန်တီးနိင်ပါတယ်။ အများသူငှာနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့နည်းပညာတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်တို့၊ မြန်မာလို ကောင်းကောင်းရှာဖွေလို့ရတဲ့အခါတို့၊ ပုံနှိပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ သတင်းစာတွေကနေ ကွန်ပျူတာစာလုံးအဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲတဲ့နည်းပညာတို့၊ လက်ရေးကနေ ကွန်ပျူတာစာလုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲတာတို့၊ အသံနဲ့စာရိုက်တာတို့၊ နောက်ဆုံး မြန်မာလို ပြောတာကို နားလည်တဲ့ AI တို့ Chatbot တို့ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သော လက်ရှိမှာခေတ်မစားသေးတဲ့ နည်းပညာတွေကိုလည်း ယူနီကုဒ်ကို အခြေခံပြီး ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကျနော် အဲလိုပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ စနစ်တစ်ခုပါ။ကိုယ့်နိုင်ငံပဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အခြားနိုင်ငံက ဘာသာစကားစနစ်နဲ့ သာ အဆင်ပြေနေရင် ကျနော်တို့နဲ့လည်း အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ညီတူမျှတူ အခွင့်အရေးရရှိမှာမိုလို့ပါ။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ ထွက်ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း ၊ အီလက်ထရောနစ်စနစ်အားလုံးမှာ ယူနီကုဒ် စနစ်က တစ်ပါတည်းပါလာပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖောင့်ထပ်သွင်းရတာမျိုးတွေ၊ ဆိုင်သွားပြင်ဆင်ရတာမျိုးတွေ အနာဂတ်မှာ ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်စက်ကိုပဲ ကောက်ဖွင့်ဖွင့် မြန်မာစာဖတ်လို့ရေးလို့ ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်း အများစုက သိချင်ကြပါတယ်။ ကျနော်မကွယ်ဝှက်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ သူ့ထက် ကောင်းတဲ့ ဘာသာစကားစနစ်အခုထိ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တကမ္ဘာလုံးက နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးက ဒါကိုပဲ အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေမှာတော့တစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဇော်ဂျီစနစ်က ယူနီကုဒ်နဲ့ သဟဇာတမဖြစ်ပါဘူး။ ဇော်ဂျီစနစ်၊ ဖောင့်ထည့်ထားတဲ့သူတွေက ယူနီကုဒ်နဲ့ ရေးသားထားတဲ့စာကို အများစုဖတ်လို့မရပါဘူး ၊ ဒါကြောင့်မို့ ဇော်ဂျီဖောင့်ထည့်သွင်းထားသူများက ယူနီကုဒ် စာတွေမြင်တိုင်း ဒါဟာဖတ်လို့ရတဲ့ စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို လက်မခံကြတာမျိုးရှိပါတယ်။ တကယ်လို့သာ သူတို့ဟာ ကွန်ပျူတာအသစ် ဖုန်းအသစ်လဲလိုက်လို့ ရှိရင် ယူနီကုဒ် ကို ဖတ်လို့ရပြီး အများသူငှာရေးတဲ့ ဇော်ဂျီစနစ်နဲ့စာ ကိုဖတ်လို့မရတော့ပြန်ပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေးမှာ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ မြန်မာယူနီကုဒ် ကိုစတင်အတည်ပြုတဲ့ အချိန်က သက်တမ်းနုသေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသုံးပြုသူကလည်းနည်းပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစနစ်ကို အတည်မပြုခင်အချိန်က ထွက်ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေမှာ တော့ ဒီစနစ်ကို သုံးလို့ရဖို့က အတော်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ၊ window xp , window 2000 တို့လိုစက်မျိုး၊ Android version 4.4 ထက်နိမ့်တဲ့စက်တွေမျိုး၊ ရှေးရှေးကထွက်ခဲ့တဲ့ နိုကီယာ ကီးပတ်ဖုန်းမျိုး၊ software အနေနဲ့ပြောရရင် page maker 6.5 တို့လို ဆော့ဖ်ဝဲမျိုး၊ အဲဒီလို အရာတွေမှာ မြန်မာစာ ယူနီကုဒ်ကို သုံးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ယူနီကုဒ် မပေါ်ပေါက်ခင် ရှေးခတ်က ရှိခဲ့တဲ့ အရာများဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်ကစလို့ နောက်ပေါ်လာမယ့် နည်းပညာအားလုံးမှာတော့ အသုံးပြုလို့ရပါမယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို တရားဝင် support မလုပ်ပေးသေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးlist ထဲမှာ မြန်မာက မပါလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဈေးကွက်မရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယူနီကုဒ် ကို စသုံးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲ?
ပထမတစ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ရေးချင်သလိုရေးတဲ့စာတွေကို ကွန်ပျူတာကနေ စနစ်ကျအောင် ထိန်းကျောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- စလုံးနဲ့ ယပင့်ပေါင်းပြီး ဈ ဆိုပြီးလုပ်နေတာမျိုးတွေ ၊ ( ဈ ၊ ဈ )၊ သုညကို ဝလုံးအဖြစ်ရိုက်နေတာမျိုးတွေ ၊ ဥ နဲ့ ညကလေးကို မကွဲမပြားရိုက်နေတာတွေကို သူကထိန်းညှိပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
စာလုံးပေါင်းအမှားအယွင်းတွေများလွန်းတာ၊ စာလုံးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုရိုက်ချင်သလို ရိုက်နေတာတွေကိုလည်း အမှန်ပြင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်တွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းသာ သုံးနေကြရင် အချင်းချင်း စကားပြောဆက်သွယ်တာက အခက်အခဲမဟုတ်တော့ပါဘူး ။ နှစ်ဖက်စလုံး အမှန်မြင်မှာပါ။
လက်ရှိသုံးနေကြတဲ့ မြေပုံတွေ၊ လမ်းနာမည်တွေ ၊ မြို့နာမည်တွေ၊ အားလုံးကိုGoogle map, open street map မှာ မြန်မာလိုရှာလို့ရပါတော့မယ်။ သုံးတဲ့သူများလာရင် ဝိုင်းပြီးဖြည့်ပေးတဲ့သူတွေလည်းများလာလို့ ပိုမို quality ကောင်းလာပါတော့မယ်။ Google မှာ မြန်မာလို ရှာရင် အချက်အလက်တွေအများကြီးပေါ်လာပါတော့မယ်။
မြန်မာဝီကီမှာ ဝင်ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့သူတွေပါလာလို့ ကျနော်တို့ မြန်မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွကိုဝီကီမှာပိုဖတ်ရမယ်။ TED TALK လိုနေရာမျိုးမှာ အရမ်းမိုက်တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို မြန်မာလို စာတန်းထိုးနဲ့ဖတ်လို့ရမယ်။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲစာရင်း ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်နာမည်က စာရင်းထဲရှိလျက်သားနဲ့ ဖောင့်မကိုက်လို့ ရှာမရဘူး ၊ ဖတ်မရဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်တော့ပါဘူး ။ မြန်မာလိုနာမည်တင်မကဘူး။ တိုင်းရင်းသားဒေသက လူမျိုးတွေလည်း သူတို့တိုင်းရင်းသားနာမည်ကို ယူနီကုဒ်နဲ့ ရှာလို့ရပါတော့မယ်။
နောက်ဆိုရင် English လိုတတ်တဲ့သူမှ အင်တာနက်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်မယ် ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ website တွေမှာ ဖောင့်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ နေရာတိုင်းသုံးတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ၊ ခေါင်းစီး၊ စာကိုယ် သူ့နေရာနဲ့သူ လိုက်ဖက်တဲ့ဖောင့်တွေသုံးကြလို့ပို ကြည့်လို့ကောင်းလာမယ်။ အစည်းအဝေးတွေ၊ email တွေမှာ ဖောင့်စနစ်ပေါင်းစုံမသုံးတော့ပဲ ယူနီကုဒ် စနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ဖောင့်တွေ ( ဥပမာ- Myanmar3, Pyidaungsu, Padauk, Notosans Myanmar) စသဖြင့် သုံးကြလို့ နည်းပညာအခက်အခဲ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကြီး မဖြစ်တော့ပဲ၊ လိုရင်းကို ထိထိရောက်ရောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်မယ်။ Google ကပေးတဲ့ အခမဲ့ စနစ်တွေကို ချက်ချင်းလက်တင်သုံးလို့ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ အချို့ကပြောတာ ဇော်ဂျီနဲ့လည်းသုံးလို့ရတာပဲတဲ့ ၊ အဲဒါမှန်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုသုံးလို့ရဖို့ facebook တို့ Google တို့က တမင် လုပ်ပေးထားတာပါ ။အဲဒီလို ရဖို့ နောက်ကွယ်ကနေ မလိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေ၊ အချိန်ကြာမြင့်မှုတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်သက်လုံး ကျနော်တို့ အဲလို ရနေမယ်လို့ အာမမခံထားပါဘူး။ ကျနော်တို့ အားလုံး ယူနီကုဒ် ပြောင်းပြီးတဲ့အချိန် သူတို့ရဲ့ ဇော်ဂျီကို support ပေးမှုက ရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ယာယီ ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်၊
September 20, 2019 at 09:29 am